ကျွန်ပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ | Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL
မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမီတက်၌ကျွန်ပ်တို့သည် ကျွန်ပ်တို့ဘဝတာအတွင်း တချိန်မဟုတ်တချိန်၌ အခက်အခဲ အကြပ် အတည်းများနှင့် တွေ့ကြုံရမည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ထား ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ အောက်ဆုံးအဆင့်၌ တဦးချင်းစီ၏ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများ အပေါ် တုံပြန်မှုများသည် ကျွန်ပ်တို့ အတွက်သော်လည်း ကောင်း၊ ကျွန်ပ်တို့ မိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် ကျွန်ပ်တို့အား ခန့်အပ်ထားသော မြန်မာယန်စီကြေးနီ ကုမ္ပဏီလီမီတက် အတွက်၎င်း တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ပတ်သက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတခု၏ အဆင့်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သူများ၏ ဆုံးဖြတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများအတွက်ပါ အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများ အတွင်း အကျိုးသက်ရောက် စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လူတဦးချင်းစီ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် နောက်ဆုံးအဆင့် အသက်ရှင်ကျန်ရှိရေးအထိ တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
အမှန်တကယ်အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတခုသည် မည်သည့်အရွယ်အစား၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း နှင့်မည်သည့် နေရာ တွင်လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများနှင့် ကင်းလွတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အရေး ပေါ် ကိစ္စရပ်များသည် အချိန်အခါမရွေး ၊ပုံသဏ္ဏန်မျိုးစုံ အကြောင်းမျိုးစုံတို့ကိုအခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ၎င်း အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ လူများနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ ပျက်စီးဆုံးရုံးမှုပင်ဖြစ်သည်။ အရေး ပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သည့် အစီအစဉ်များကို မိမိတို့လုပ်ငန်းများ ထိရောက်အာင်မြင် အကျိုးရှိစေရေးအတွက် စီမံချက်ချ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်သကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ရှေးဦးမဆွကပင် ကြိုတင်စီမံထားရပါမည်။ ပုံမှန်အနေအထားသို့ လုပ်ငန်းများကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး ရောက်ရှိ အောင် ဆောလျင်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်များကို ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြွေကိုက်ခံရလျှင်၄င်း၊ ကားတာယာဘီးပေါက်လျှင်၄င်း၊ အဖွဲ့အစည်းတခု မန်နေဂျာနှင့် ဝန်ထမ်းများက မည်မျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တုံပြန်နိုင်မှုသည် ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ အရေးပေါ် အခြေအနေ တုံပြန်နိုင် မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက် နွယ်နေပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင်အယူအဆများက စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုပုံသဏ္ဏန်သည် လူများနှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်အခြေအနေများအပေါ် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှီသည်ဟု ငြင်းခုံမှုကို ခေတ်ပြိုင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အယူ အဆများက ထောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် ပုံမှန်နှင့်တည်ငြိမ်သော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေတွင်ကာင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံသဏ္ဏန်များသည် လျှင်မြန်၍ ဖိအား များသော အရေးပေါ် အခြေနေများတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကျဆင်း၍ မထိရောက်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာယန်စီကြေးနီ လီမီ တက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ဦးတည်မျှော်မှန်းချက်အနေဖြင့် အရေး ပေါ် အကြပ် အတည်း ကိုင် တွယ်မှုဆိုင်ရာ မန်နေဂျာများသည် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ တွေ့ကြုံနေသော ပြသနာများကို ဖြေရှင်းရေးတို့၌ အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်တက်ကြွသော အရည်အချင်းများ ရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ် ထားပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေများ အတွက် အစီအစဉ်များအား သက်ဆိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုဗဟုသုတများဖြင့် ထပ်မံဖြည့်ဆည်း ပန့်ပိုးလျှက် မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမီတက်၏ အဓိကကျသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအား အသိ ပေးဝေငှပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးစေခြင်းဖြင့် တန်ဘိုးအရှိဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများ၌ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေး အဆင့်အတန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် အစီအစဉ်တစ်ခုကို မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမီတက်မှ ဖေါ်ထုတ်ချမှတ်ထားခဲ့ပြီး ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်မှုအစီအမံအရ အထက်မှအောက်ခြေ ဝန်ထမ်းအထိ ဝန်ထမ်းတိုင်းသိရှိ ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီမံထားပါသည်။ စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဖေါ်ထုတ် သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ရာ ယင်း အစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုင်းရှိ ဝန်ထမ်းတိုင်း လိုအပ်ချက် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်စေလျှက်ရှိပါသည်။
စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုဖေါ်ထုတ်ချမှတ်ရာတွင် ကျွန်ပ်တို့၏လမ်းစဉ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် တင်ပြ ချက်များသတ်မှတ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ နှင့် ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်များ၏ ညီညွတ်စွာဖြင့် အချိန်နှင့်အညီ လိုက်နာအသုံးချ နိုင်စေ ရန် ဖြစ်သည် ။ အစီအစဉ်များကို လွန်ခဲ့သောကာလ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အရေးပေါ်အခြေ အနေ များ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေအနေ များအားပူးပေါင်းအခြေခံစေပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်း များအတိုင်း ပုံစံချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်ကို နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလျှက် ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်စီစဉ်ထားပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ကိုထိန်းသိမ်းရန်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်းပြောင်းလဲမှု၏ အကြောင်းအရင်းကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ရန်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးလာခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေရန်
စံပယ်တောင်၊ကြေးစင်တောင်စီမံကိန်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်ကျော်မှစ၍ လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုများ၊ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုး တို့ကို ဆက်လက်၍ ရေရှည်တည်တံ့စေရန်မျှတစွာ ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ MYTCL သည် သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်များနှင့်တိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်၍ အကျိုးသက်ရောက်ထိခိုက်စေနိုင်သော ကျေးရွာများနှင့် ဆက်ဆံရေးပို၍ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေခြင်းသည် အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကဖြစ်သည်။
သဘာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် ရည်မှန်းချက်များတင်ပြထားမှုနှင့်အတူ S&K စီမံကိန်း၏ မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် (EMS) ကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပေါင်းစည်းထားပါသည်။ ဤလိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းကို MYTCL ၏ SGSအသိအမှတ်ပြုမှုတို့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ EMS သည် MYTCL မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအမံကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြောင့် ပတ်ဝန်း ကျင် ထိခိုက်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။
S&K စီမံကိန်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဓိကထုတ်ပြန်ချက် (၄) ချက်ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဖြစ် ပါသည်။
၁။ အက်စစ်ဖြစ်ထွန်းသောကျောက်နှင့် သတ္တုကျောက်ရေမြောင်း (ဟင်းလင်းပွင့်သတ္တုတွင်းနံရံနှင့် စွန့်ပစ်မြေစာပုံများမှထုတ်လွှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိ)
၂။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများ (Hydrocarbon ပစ္စည်းများ၊ ကန့်ငရဲမီးနှင့် သတ္တုထုတ်စက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ဓာတ်ဆေးများ)
၃။ မြေအနေအထားအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်း (တိုးချဲ့လုပ်ငန်းများကြောင့် မြေအနေအထား အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခြင်း)
၄။ နည်းစဉ်တွင်ပြန်သုံးမရသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (အမှိုက်၊ စက္ကူနှင့် ပလပ်စတစ်များ၊ ရာဘာပစ္စည်း နှင့် ဘက်ထရီအိုးအဟောင်းများ)
ISO စံချိန်စံညွှန်း ISO 14001:2015 နှင့်အညီလိုက်နာပြည့်မီမှုရှိစေရန်အလို့ဌာ EMS စနစ်တစ်ခုလုံးကို အောက်ပါလမ်းစဉ်များအတိုင်းနည်းလမ်းတကျအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
• အထက်ဖော်ပြပါနှင့်ထိုထက်ပိုသည့် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့် ထုတ်ပြန်ချက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများ (EMP) ကိုတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအစီအမံများသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကိုထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာသွားပါမည်။
• အစီရင်ခံတင်ပြလာသောတွေ့ရှိချက်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လမ်းကြောင်းများအတွက် ရလဒ်များကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါကပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရန် အတိုင်းအတာများကို အကောင်အထည် ဖော်သွား ပါသည်။
• EMP များအပေါ်အခြေခံ၍အသေးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော်သွားပြီးဖြစ်သည်။
• ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်သည့် စီမံချက်တစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်ပြီး လုပ်သားဝန်ထမ်းများနှင့် ဌာနအားလုံးကိုအခြေခံသင်တန်းပေး၍ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ပေးသွားပြီး ဖြစ်သည်။
• MYTCL ၏စီမံကိန်းအသစ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်ဆန်းစစ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရ ပါသည်။
• နည်းပညာလွှဲပြောင်းပေးရသည့်အစီအမံတစ်ရပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးသတ္တုတွင်းဒေသအတွင်းနှင့် ပြင်ပတို့ တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းကိုဆောင်ရွက်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
• မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမျိုးမဆိုဝန်ထမ်းအားလုံးသည် လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက် ရောက် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်သင်တန်းပေးရပါသည်။
• ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိုအရည်အသွေးမြှင့်ထားပါသည်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို သေချာစွာသိမ်းဆည်းထားပြီး၊ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်း၍ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်အောင်လည်းထားသို ထားပါသည်။ အဆက်မြတ်တိုးတက်အောင်မြင်နေစေရန် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ပြန်လည်သုံးသပ် စီစစ်ခြင်း နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီကိုက်ညီအောင်ပြုစုထားပါသည်။
ကမ္ဘာအဆင့်အတန်းမီသတ္တုတွင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာထိန်းထားနိုင်ရာလေအောင် S&K စီမံကိန်း သည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစနစ်၏ ထိရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်မှတ်သားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် ယိုးဒယားနိုင်ငံတို့မှ SGS လုပ် ငန်းစစ်ဆေးသူများသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတွင် နှစ်လည်နှင့် နှစ်ဆုံးတိုင်း ISO 9001, OHSAS 18001 နှင့် ISO 14001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတွက်MYTCL ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် SGS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (၃) စောင်ကို ၂၀၁၈-၂ဝ၁၉ အထိပြန်လည်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ SGS မှသင်တန်းဆရာများ၏ အသိအမှတ်ပြုလုပ်ငန်း စစ်သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်ရရှိထားသော MYTCL မှဝန်ထမ်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အတွင်း လုပ်ငန်းစစ်အဖွဲ့များမှ သုံးလတစ်ကြိမ်ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်းကိုပြီးစီးအောင် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင် သွားရပါသည်။
ထိန်းထားနိုင်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လာခြင်းနှစ်ခုစလုံးအားအောင်မြင်မှုရရန် လိုအပ်မှုသည် MYTCL ၏ရွေးထုတ်ထားသောအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များအရအသိအမှတ်ပြုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ တည်ရှိဆဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို MYTCL မှ ထပ်တလဲလဲတန်ဖိုးချင့်တွက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် နိစ္စဓူဝခြေခြေမြစ်မြစ်ရှိသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိလေအောင် ဖြစ်ရပ်၏ပင်မအကြောင်းအရင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိရသည့်အကြောင်းများနှင့် အားပျော့ဟာကွက်များကိုစူးစမ်းစီစစ်၍ လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်ပေးခြင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့အတွက် စီမံချက်တစ်ရပ်ကို အထူးထူး အပြားပြားသောသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက် သွားရန်ကိုလည်းဖော် ထုတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်သွားရန်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင် ရည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ၍တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
MYTCL မှပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရမည့် ပင်မဧရိယာ (ရ)ခုကိုစီစစ်သုံးသပ်ထားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ - လေ၊ ရေ၊ စွမ်းအင်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ မြေယာ၊ သတ္တဝါမျိုးရင်းစိတ် အမျိုးအစားများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးမတော်တဆမှုအစီရင်ခံတင်ပြရာတွင် ယင်းအချက်များပါဝင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် အညွန်းကိန်းသော့ချက် (KPI) အားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည့်နေရာများတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်းသော့ချက်များကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရမည့်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မှုအတွက် MYTCL တွင်တန်ဖိုးချင့်တွက်ရန်အသုံးပြုပါသည်။ ဧရိယာတစ်ခု ချင်းစီကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်၍ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ ဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်ရန်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမီတတ်၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုညွှန်ပြချက်များကိုအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် အဆင့် (၃)ဆင့်ရှိပါသည်။
• သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ တည်ရှိနေသော အနေအထားအတိုင်း ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန်။
• ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု အကြောင်းရင်းများကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်။
ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ၎င်းတို့၏ဘဝအဆင့်အတန်းပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်ရေးနှင့် ဘဝသက်တမ်းအတွင်း ပိုမို တိုးတက်ရေးအတွက် ထိန်းချုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်လာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသော လုပ်ငန်းတရပ်ဖြစ်သည်။
ဘေးအန္တရာယ်များစီမံခန့်ခွဲရေးသည် ဓါတ်သတ္တုတူးဖေါ်ရေး ကုပ္မဏီများ၏အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသော စွန့်စားရမှုများသည် စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်းအများအားဖြင့်လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအပျော့စားကိစ္စရပ်များသည် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် ကြီးမားသော စွန့်စားရမှုများဖြစ်ပေါ် လာလျှက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံယူရမှုတွင် လူမှုရေးမျှော်မှန်းချက်များသည် ကုမ္ပဏီများကထိခိုက်နစ်နာသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အရေးယူပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးသည် သာမက သက်ဆိုင်သည့် အိမ်ရှင်တိုင်းပြည်နှင့်အိမ်နီးနားချင်း တိုင်းပြည်များ တွင်ပါ ရေရည်တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှု၏တိုးတက်ရေး ကိုဆောင် ရွက်ထိမ်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လူမှုရေးဆိုင် ရာဆောင် ရွက်ပိုင်ခွင့်လိုင် စင် တစ်ခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်မျှော်လင့်ကြပြီဖြစ်ပါ သည်။ ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ဖွဲ့စည်းနထိုင်သူများ၏ အင်အားသက်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာစေပြီး ၎င်းတို့၏ လူနေမှု ဘဝအဆင့်အတန်းမြင်းမားလာ သည့်အပြင်ဘဝနှင့်ရည်ရှည်သက်ဆိုင်သောဆုံးဖြတ် ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်လာခွင့်ရရှိ စေရေး ပင်ဖြစ် သည်။
တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်သည် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်အင်အား သက်ဝင်မြင့်မားလာစေရေး အတွက် အထောက်အကူပြုသည်။ အများအားဖြင့် ဓါတ်သတ္တု တူး ဖေါ် ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုများ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ၏မကြာခဏ အကျိုးသက် ရောက်မှု များတွင် ဒေသခံ ပုဂ္ဂိုလ်များ အား အလုပ်ခန့်ထား ခြင်း၊ ပညာရေးတိုးတက်လာစေရေးနှင့် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင် မှုအတွက် လေ့ကျင့်ပေးသည့် အစီအစဉ်များ ပါဝင် ပါ သည်။ ရေရည် တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့စည်း နေထိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခန်းတခု၏အရေးပါသောအချက် မှာ ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးရုပ်သိမ်းပြီးနောက်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ ထပ်မံထည့် သွင်း မှုအင်အား မပါဝင်သော ဆက်လက်ရှင် သန်နိုင်ရေး ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေရည် တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုး အစီအစဉ်သည် ပြန်လည်အစားထိုးနိုင် ခြင်းမရှိ သော သယံဇာတ များကိုတဘက်မှ သုံးစွဲရင်း အခြားတဖက်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအတွက် ရည်ရှည် အကျိုးခံ စားရ မည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး အတွက် အရင်းအနှီး တခု ဖြစ်လာ စေသည်။
ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု
စီးပွားရေး နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအခွင့်အလမ်းနည်းသော (သို့) အနည်းငယ်သာအလားအလာရှိသော ဒေသများတွင် ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် အဓိက တာဝန်ရှိသည့်အပိုင်း မှ တာဝန် ယူ၍ လူနေမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားရေရှည်တည်တ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဝင်ငွေရရှိရေးကိုလည်းဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရာဒေသ ဝန်းကျင်၌ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အထောက်အကူတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်မှာ အထူးမှန်ကန်သော အချက်တခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြာင့် သယံဇာတများ ကုန်ခန်းသွား၍ ဓါတ်သတ္တုတူးဖော်လုပ်ကိုင်ရေးလုပ်ငန်း ပြီးစီးရုပ်သိမ်းသွားသည့်ကာလ နောက်ပိုင်း၌ အဆိုပါဒေသတွင် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှင်သန်ကျန်ရစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကို ရောက်ရှိအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမှာ သက်ဆိုင်သည့် ဒေသရှိ လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပမှ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရေးအတွက် ဆက်စပ်မှုများ ရှင်သန်လာအောင် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဓါတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ သက်တမ်းတစ်ခုအတွင်း ဓါတ်သတ္တုများမှ ရရှိသော ဝင်ငွေနှင့် အကောက်ခွန်များ ခွဲဝေခံစားရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာနှင့် အမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရများအနေဖြင့် ဓါတ်သတ္တုသယံဇာတများ၏ ပိုင်ရှင်ဟု သတ်မှတ်ယူဆလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် ဓါတ်သတ္တုသယံဇာတရှိသော ဒေသဆိုင်ရာတို့ အကြား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးမှုတွင် ကွဲပြားသွားလေ့ရှိခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ရေရည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ၄င်းလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိသည့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းတစ်ခုခု ခံယူသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၄င်းတို့လုပ်ကိုင်ရာ ဒေသအတွက် အကျိုးရှိစေရေး၊ လုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပြုပြင်ပေး၍ နိုင်ငံတော်ဗဟိုအစိုးရမှ ရရှိမည့် ဓါတ်သတ္တုအခွန်နှင့် အခြားအခွန်ငွေများထက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် ဒေသအတွင်း နေထိုင်သူများ ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် ၄င်းတို့ မြေမှ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ဖယ်ရှားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးကြရမည် ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဘဝရှင်သန် တိုးတက်ရေးအတွက် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် တခြားကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းအခွင့်အရေးများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေး အတွက်လည်း တာဝန်ရှိသူအဖြစ် အထောက်အကူပြုပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အတိုးနှုန်းနိမ့်သော ချေးငွေများ နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေး လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းစတင်ချိန် ကာလအတွင်း ကန်ထရိုက်တာများပေး၍ ဝယ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ များအား လုပ်ငန်းများကို ရရှိစေသင့်ပါသည်။ ဤကိစ္စမှာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ခက်ခဲပါသဖြင့် အခြားဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပက်သက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သော အစိုးရများနှင့် ကူညီထောက်ပံ့သော အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် သေချာစွာ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဗဟိုအစိုးရသို့ ဓါတ်သတ္တုသယံဇာတများမှ ကောက်ခံရရှိသည့် အခွန်ဝင်ငွေများကို ၄င်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာဒေသများ၌ ပြန်လည် ရင်းနှီးရန် အားပေးလှုံ့ဆော်သင ပေသည်။ အလားတူပင် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများလည်း ယင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာလည်း အရေးကြီးသော ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရများအနေဖြင့် တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဒေသန္တရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ၄င်းတို့ဘာသာ ချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမိတက်၏ ရေရှည်တည်တံ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းနေထိုင်သူများ၏ တိုးတက်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပက်သက်သည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ထည့်ဝင်မှုများကို အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအပေါ်၌ အခြေခံ၍ စနစ်တကျနှင့် ဓမ္မဒိဌာန်ကျသော ရည်မှန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းတွက်ချက် ဖော်ထုတ်သွားရန် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ
MYTCL သည် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။SGS- Société Générale de Surveillance အရ စာချုပ်စာတမ်း ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
* OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
* ISO 14001 ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
* ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာယန်စီကော့ ပါးလီမိတက်သည် LME အဆင့် A အသေးစိတ် အချက်အလက် များနှင့်အညီ cathode ကေ့ာပါး အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်လုံခြုံမှု စံချိန်စံညွှန်း တန်ဖိုးများ အစဉ်အမြဲတိုးတက်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံး အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ (ISO) မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စံနှုန်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ (ISO) မှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ဝေထားသည့် စံနှုန်းများအတိုင်း လိုအပ်လျက်ရှိသော ISO 9001 နှင့် 14001စံနှုန်းလက်မှတ်ရရှိရေးအား မြန်မာယန်စီသည် ၂ဝ၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမတိုင်ခင် ရရှိရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
OHSAS 18001 စံချိန်စံညွှန်းသည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ၊ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ အတွက် ဗြိတိသျှ စံချိန်စံညွှန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစနစ်တွင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုး အစားအားလုံးတို့အား ပံ့ပိုးကူညီရန် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ၊ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့ အတွက် ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံ၍ လက်တွေ့ပြနိုင်သော လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ စံနှုန်း၊ များများစားစားကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွေ့မြင်ရပါမည်။ MYTCL ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဤစနစ်အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိအတွက်အောက်ပါတို့ကို အကျိုးပြုမည့် လုပ်ငန်းဘောင်တစ်ရပ် ဖြစ်လာပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းဝန်းကျင် တစ်ရပ်အဖြစ်လည်း အထောက်အကူ ပြုလာပါသည်။
- တစ်သမတ်တည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဘေး အန္တရာယ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊
- မတော်တဆထိခိုက်ဖြစ်ပွားမှုများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျော့ချခြင်း၊
- ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊နှင့်
-လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးအပေါ် တိုးတက်မှု ရှိလာစေခြင်း။
ISO-14001 စံချိန်စံညွှန်း အသိုက်အအုံတွင် ISO-14001 စံနှုန်း အများစု ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ စံနှုန်း များသည် အဖွဲ့အစည်းများမှ ထိရောက်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တစ်ရပ်အား ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကျောရိုးသဖွယ် အသုံးပြုရန် ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ISO-14001 သည်သက်ဆိုင်ရာပြဠာန်းထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို လိုက်နာကျင့်သုံးစေ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေရန် MYTCL အားကူညီပံ့ပိုးသွားမည့် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ သဘောသဘာ၀ အလျောက်ဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MYTCL သည် ISO-14001 စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရင်းမြစ်တို့၏ အကျိုးထိရောက်မှုကို တိုးတက် စေခြင်း ၊စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိ မှုလျော့ နည်း စေခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် ကျဆင်းစေခြင်းများ ရရှိလာပါသည်။ ထို့ပြင်လည်း MYTCL ၏ အုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပါဝင် ပတ်သက်သူများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို တိုင်းထွာထားပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း အသေ အချာ ပံ့ပိုးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ISO-9001 စံချိန်စံညွှန်း အသိုက်အဝန်သည် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်နွယ် ၍ ပြဠာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကျွန်တော်များ၏ ဖောက်သည်များနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ၏ လိုအပ်ချက် များ ပြည့်မီကြောင်း MYTCL အား ဤစနစ်အရပံ့ပိုးကူညီထားပါသည်။
ISO-9001 စံချိန်စံညွှန်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံမူ (၈)ချက်ပါဝင်ပြီး ယင်းမူများသည် စံထားရမည့် မူဘောင်စံညွှန်းများကို အခြေခံ၍ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်၏ အဓိကကျသော အခြေခံ အချက်နှင့် ဆက်နွယ်ထားပါသည်။ ထိုစနစ်သည် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရယူလိုသော ဆန္ဒပြည့်ဝစေမည့် စံချိန်စံ ညွှန်းပြည့်မီစေရန် လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်းဆက်နွယ်ပါသည်။
တတိယပါတီအဖွဲ့၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များသည် ISO-9001 လိုအပ်ချက်များကို MYTCL မှပြည့်မီကြောင်း ဘက်မလိုက်သော အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံချက် များဖြစ်ပါသည်။
MYTCLသည် ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ရေရှည်တည်တံ့စေသော်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စေသည့် အခြေခံ အချက်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံထား သည်။ ပေါင်းစပ် စီမံအုပ် ချုပ်မှု ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲညွှန်ကြားအုပ်ချုပ်သောစနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MYTCL မှရရှိပြီးသော အထိမ်းအမှတ်များ (ဆု၊ တံဆိပ်၊ လက်မှတ်များ) နှင့် မူဝါဒများအပြင် မိမိတို့လုပ်ဆောင်မည့်လမ်းစဉ်များကို တည့်မတ်စေရန်နှင့် စဉ်ဆက် မပြတ်ဆက်လက်တည်တံ့နေစေရန် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း စဉ်များ၊ နည်းစနစ်များ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များဖြင့် ဖော်ဆောင်ထားသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် MYTCL မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ကြီးပွားတိုးတက်မှု၊ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းများ အတွက် တာဝန်ယူမှုအပြင် မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပေါ် ကျရောက်လာ နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ခွဲခြားစီစစ်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူရမည့်စနစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
MYTCL ၏ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် ဤပေါင်းစပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဆောင်ပြီး၊ MYTCL ၏ စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အလေ့အကျင့် ကောင်းများကို ပေါင်းစပ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော ပေါင်းစပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
VIPs visit to MYTCL Sabetaung and Kyisintaung in 2013: Board of Directors are 3rd and 4th from left; Mr Zhang Dong Song and Mr Geng Yi; and 3rd from right is Mr Zhang Xiang. President of Wanbao Mining is 5th from left, Mr Chen Defang.
MYTCL ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ရေရှည်တာဝန်ယူမှု ရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလေးစားလိုက်နာခြင်း၊ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေအတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ အငြင်းပွားမှု ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းတိုင်း ရိုးသားစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန်ခံခွဲမှုနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အသုံးပြုရန် ထောက်ခံအားပေးသည်။
MYTCL ၏ လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန်ခံခွဲမှုနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးတို့မှ ကုမ္ပဏီအပေါ် ထားရှိသည့် ယုံကြည်အားထားမှုကို ပိုမိုလေးနက်ခိုင်မာစေသည်။ MYTCL ၏ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏အလုပ်သမားများ၊ အစုရှယ်ယာဝင်များ၊ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲသူများ၊ ကုမ္ပဏီ လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးသူ များနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ရှိဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ် ထားရှိသော မူဝါဒများကို အထူးလေးစား လိုက်နာကြရမည်။
ထပ်မံ၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးမူဝါဒ၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုအပိုင်းတွင် သင့်တင့်မျှတစွာ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ခန့်ထားခြင်း မူဝါဒ၊ ငွေလုံးငွေရင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမူဝါဒ၊ ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် မျှဝေမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ဝန်ထမ်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ဝန်ထမ်းထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုလျော်ကြေးဆိုင်မူဝါဒ အစရှိသည်တို့ကိုလည်း သီးခြားမူဝါဒများအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးလျှက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်မှုများသည် မြန်မာယန်စီ အပေါ် တန်ဖိုးထားမှုအား တည်တံ့ခိုင်မြဲစေပါသည်။ ဒေသခံ ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက် နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာဖြင့် တာဝန်သိ၍ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ပြီး၊ မြန်မာယန်စီ၏ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သွားကြရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်တွင် မမြင်နိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်နိုင်ရန် တိကျခိုင်မာသော စနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားမှုစနစ်များ ထားရှိသည်။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းအပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ရာ နေရာတိုင်းတွင်လည်း ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ရှိနေပါသည်။
မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်သည် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာ တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များကို ထိန်းချုပ် နိုင်ရန် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လမ်းစဉ်များနှင့် မူဝါဒအရပ်ရပ်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးတွင်ထားရှိပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော စစ်ဆေးကော်မတီသည် (၃) လလျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပြီး၊ ပြည်ပ SGS Audits မှ တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ်စစ်ဆေးပါသည်။ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒ သည် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တိတိကျကျလိုက်နာမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များပါသည့် ဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့် ရည်ရွယ်ချမှတ်ထားသည်။
ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အဆင့်ဆင့် ထားရှိပါသည်။
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးမှုကော်မတီသည် စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့၏ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းအတွင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် အတွင်းအပြင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးမှု အဖွဲ့များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်လည် သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း များပြုလုပ်ကြရသည်။ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ သုံးသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်သို့ တင်ပြရပါသည်။ ထိုမှတဖန် ကုမ္ပဏီ၏ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုနှင့် ဥပဒေအရတာဝန်ရှိမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု၊ အလုံးစုံလေးစားလိုက်နာပြီးစီးမှု စသည်တိုကို အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့် မှတဆင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့သို့ တင်ပြအစီရင်ခံ ရပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၊ ၎င်းသည် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအပါအဝင် အကြီးတန်းမန်နေဂျာများအတွက်ထိပ်တန်းဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်မှု
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေ ၁၉၉၄ နှင့် မြန်မာ့သတ္တု တွင်း နည်းဥပဒေ ၁၉၉၆တို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေနှင့်အညီ သတ္တုတွင်းများ စစ်ဆေးရေး၊ သယံဇာတဓာတ်သတ္တုများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ သတ္တုတွင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု၊ သတ္တုတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ညွှန်ကြးရေးမှူးချုပ်သည် မြန်မာ့ သတ္တုတွင်း ဥပဒေအောက်ရှိ စစ်ဆေးရေး အရာရှိချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ခွင်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာများကို စီစစ်ခြင်းနှင့် ခွင်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းများကို အထက်ပါ ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးပိုင် သတ္တုတွင်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် လွှဲပြောင်းခြင်းကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင် ရမည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စွန့်ဦးတီထွင်သူများကဏ္ဍ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်နိုင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုရမည်။
၎င်းဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကြီးဌာန www.mining.gov.mm မှချမှတ်သည့် သတ္တုတွင်းမူဝါဒအရ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် စီမံကိန်းအစီစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသည်။